Telecom rafitra famatsian-peo hery - China Renergy Equipment Co., Ltd
Small rivotra turbines no vahaolana tonga lafatra ho an'ny sehatry ny fifandraisan-davitra.
Telecom stations dia Naparitaka be dia be manerana izao tontolo izao mba hahazoana antoka ny fifandraisana ampy fotodrafitrasa. Amin'ny ankamaroan'ny faritra lavitra, ny hery takiana ho an'ny toby ireo matetika nanome ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny mponina teo Diesel gropy, izay tsy vitan'ny hoe lafo ny miasa fa koa ny mbola ateraky ny fôsily famatsiana solika, ny fampiasana ny Diesel gropy ho unsustainable tsy ho ela.
Renergy rivotra kely turbines amin'ny asa fanompoana sy fikojakojana zavatra takiana hahatonga ny fametrahana any amin'ny faritra lavitra sy sarotra ny fanompoana toerana tsara tarehy kokoa.
Fampiharana: Mba hanome ny azo antoka, mahomby, ary vola-peo ny tontolo iainana hery loharano ho an'ny fifandraisana finday Shina tobin'ny amin'ny faritra lavitra.
Avy amin'ny taona 2008, Renergy no nandray anjara tamin'ny famolavolana ny loharanom-baovao azo antoka hery ho an'ny Telecom-peo amin'ny faritra ambanivohitra ho an'ny finday Sina. Maro amin'ireo toerana vaovao na nohavaozina toerana no naorina ny tendrombohitra sy ny havoana, dia tsy maintsy ny tambajotra sy ny fikojakojana manaova azo entina amin'ny fotoana rehetra ny taona raha mitsidika toerana manamaivana
Ny fitaovana manan-danja ny herin'ny famatsiana rafitra no Renergy Wind Turbine. Izany no ampiasaina ho toy ny tena singa lavitra hery rafitra any amin'ny faritra ambanivohitra. Araka izany, dia voaporofo io turbine ny tenany noho ny taona maro tao amin'ny tena henjana tafahoatra ny toetr'andro izay afaka hisy ao amin'ny avaratrandrefan'i sy ny atsimoandrefan'i Shina. Northwest faritra dia faritra be rivotra; MW rivotra ny ankamaroan'ny toeram-piompiana dia hita ao. Very gusts ny rivotra mahery mety hitranga amin'ny fotoana rehetra ny taona, indrindra fa mandritra ny ririnina, ary izany no natao ratsy noho ny haavo ambony kokoa hita toerana ny fifandraisana toby ireo mba haorina. Tena zava-dehibe fa ny fitaovana napetraka amin'ny toerana ireny dia mateza sy azo antoka raha mitoetra mitaky fikojakojana kely indrindra.
Ny rafitra no miasa nanomboka tamin'ny 2009 sy ny hery ny fametrahana rafitra amin'ny toerana efa nanao tena tsara. Renergy nametraka rafitra an-jatony toy izany ho an'ny finday Shina. Ary rehefa afaka izany, Renergy nanomboka manome rafitra toy izany ho an'ny China Union, China Telecom.
Hatreto, Renergy Nanome an-jatony toy izany Telecom rafitra ho an'ny mpanjifa any Rosia, Tajikistan sy Iran.
Miasa toro lalana
Wind turbine sy ny masoandro tontonana hiteraka herinaratra, hitandrina any DC48 bateria 48V vondrona amin'ny alalan'ny rivotra sy ny masoandro mifangaro-maso, hery ho an'ny Telecom famatsiana entana.
Diesel gropy dia azo ampiasaina toy ny hery nomaniny ho solon'izay famatsiana. System afaka hatraiza hanome hery AC alalan'ny Grid inverter eny, ary koa misy ny mifandray amin'ny Grid alalan'ny tamin'ny Grid inverter.
RW-5kW miova dity ny fiara, DC200V
1. Multiple masoandro tontonana fifandraisana
2. Multiple rivotra turbine fifandraisana
3. Diesel gropy toy ny nomaniny ho solon'izay
4. Solar MPPT asa
5. Wind turbine MPPT asa
6. Solar fahefana malefaka output fanaraha-maso
7. Wind fahefana malefaka output fanaraha-maso
8. Digital bateria rafitra fitantanana angovo
9. tsaina rafitra fitantanana ny entana
10. System fahadisoana sy ny fanaraha-maso ny rafitra hamantarana
11. Wireless rafitra famindrana
12. Wind turbine hazakazaka fitantanana.
Telecom toby, faneva toby, GSM base toerana sy ny sisa.
Telecom tranga toerana fianarana
Post fotoana: Apr-19-2018